Wararkii ugu danbeeyey AC Milan oo suuqa ka baadi goobeysa Cayaartoy badan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wararkii ugu danbeeyey AC Milan oo suuqa ka baadi goobeysa Cayaartoy badan
(16-11-2018) Wararka laga helayo kooxda AC Milan ayaa sheegaya in kooxdaas ay dooneyso Cayaartoy cusub ka dib markii ay ku dheceen dhaawacyo badan oo xiriir ah.
Naadiga dalka Talyaaniga ayaa la dhutineysa dhibaatooyin is daba joog ah oo soo gaaray Cayaartoyda kooxdaas waxaana ay bisha janaayo doonayaan in ay soo qaataan Xiddigo cusub oo ay ku daboolaan boosaska ay baneeyeen Cayaartoyda dhaawaca ah.
Wakiilka Caanka ah ee Mino Raiola ayaa lacadeeyey in uu Jimcihii soo gaaray Magaalada Milano halkaa oo uu ka bilaabi doono wadahalka ugu danbeeya ee uu Zlatan Ibrahimovic ugu soo laabanayo kooxda AC Milan.
Sidoo kale kooxda AC Milan ayaa lacadeeyey in ay doonayaan Cayaaryahanka Amadou Diawara oo u Cayaara kooxda Napoli kaas oo ay heshiis amaah lageli doonaan waana Xiddig aad ugu fiican Khadka dhexe Waxaana Mlan ay u doonayaan in uu buuxiyo boosaska ay ka dhaawacmeen Cayaartoyda Biglia iyo Giacomo Bonaventura kuwaas oo mudo dheer Garoomada ka maqnaan doona.
AC Milan ayaan qarasha garayn karayn lacag aad u fara badan Maadaama laga doonayo in ay ilaaliyaan barnaamijka dhaqaale wanaaga ee Xiriirka Kubada Cagta yurub ee UEFA.